အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူများဂျကာတာရှိမြန်မာသံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြ ~ Rohingya Blogger
ရာပေါင်းများစွာသောအင်ဒိုနီးရှားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည်ဂျကာတာမြို့ရှိမြန်မာသံရုံးရှေ့၌သောကြာနေ့တွင်ဆန္ဒပြ ကြောင်းအေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကျင်းပရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုမုန်းတီးစွာလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်ဟုသိရသည်။ သုံးရာခန့်ရှိသောအစ္စလာမစ်အဖွဲ့အစည်းများမှဆန္ဒပြပွဲသို့တက်ရောက်လာသူများသည် မြန်မာသံရုံးကို ခြိမ်းခြောက်ရာ ရဲ ၅၀ ခန့်မှအဆောက်အအုံအတွက်လုံခြုံရေးပေးခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်။ တကယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စကားပြောဖို့ငြင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆောက်အအုံကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီး အကုန်လုံးပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်မယ် - ဟုဆန္ဒပြသည့်အဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှအသံချဲ့စက်ဖြင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မွတ်စလင်တယောက်ဆီကသွေးစက်တွေကျတာတွေအတွက်ပြန်ကိုပေးဆပ်ရမယ်ကမ္ဘာကြီးမှာဘာမှအလကားမရဘူးဟုဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင်ထားတစ်ဦးမှပြောကြားသည်။မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးမွတ်စလင်ညီအစ်ကိုများအတွက်တိုက်ပွဲလုပ်ကြမယ်ဟုအဆိုပါဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူထပ်မံ ပြောကြားကြောင်းအေအက်ဖ်ပီကဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြသူများသည်မြန်မာသံရုံးအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပဲကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့တွင်ဆန္ဒပြရန်ချီတက်သွားခဲ့ကြသည်ဇွန်လတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င်မွတ်စလင်များအကြားအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားပြီး လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရသည့်အပြင် ထောင်ပေါင်းများစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှစ်သိန်းခန့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဖိနှိပ်ခံရဆုံးလူနည်းစုဖြစ်သည်။ သမ္မတသိန်းစိန်မှကုလသမဂ္ဂသို့ပြောကြားရာတွင်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သောတရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာသော ရိုဟင်ဂျာများကိုလက်ခံရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ထား၍ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) တတိယနိုင်ငံများသို့ပို့ ခြင်းအဖြေရှာရန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြား၍သမ္မတ၏အဆိုကိုပယ်ချခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂမှပြောကြားရာတွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာဖိနှိပ်ထားပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရေးရာများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ၊ အမှုထမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နှင့်အခြားသောလူ့အခွင့်အရေးများကိုတားဆီးပိတ်ပင်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ RB News Desk
zaw14 July 2012 00:00who want to keep this type of aggressive people...u all say u love peace but in reality ur banners n slogans r full of threat & aggression.ReplyDeleteAnonymous14 July 2012 16:12Buddha himself paid the price from his past and said about the cause and effect. Ifacommunity done the cause, they should also expect to see the consequences. They mentioned with only words for the injustice and showed their will to fight for the justice whereas the neo-nazi racist are cowardly killing on the grounds. The Indonisian people did not say to attack their Buddhist citizens which showed how tolerate they are.ReplyDeleteSave Rohingyas15 July 2012 05:04zaw Who is aggressive ?Look at these photos.http://www.facebook.com/media/set/?set=a.268441383259677.49207.202664583170691&type=3၀မ်းတွင်းမြို့နယ်မှ ရွာနှစ်ရွာကြား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့။၀မ်းတွင်းမြို့နယ် နေပူကုန်းရွာနှင့် ဆပ်ခင်းရွာကြား လမ်းဖောက်ရန်စီစဉ်ရာမှ ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀မ်းတွင်းမြို့နယ် နေပူကုန်းရွာနှင့် ဆပ်ခင်းရွာကြား လမ်းဖောက်လုပ်ရန်စီစဉ်မှုတွင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် သဘောထားမတူညီမှုများကြောင့် ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့က အဆိုပါကျေးရွာနှစ်ရွာမှ ရွာသူရွာသားများ အုပ်စုဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာက ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရကြောင်း CJMyanmar မှ သိရသည်။ အဆိုပါ ရွာနှစ်ရွာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာတွင် ဇွန်လ (၃၀)ရက် နေ့လည် (၁)နာရီဝန်းကျင်က စတင်ကာ တစ်ဖက်လျှင်ရွာသူရွာသား ထောင်ဂဏန်းမျှပါဝင်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ခဲဖြင့်ပေါက်ခြင်း၊ တုတ်၊ လေးခွများကိုင်ဆောင်၍ ပစ်ပေါက်ကျူးလွန်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ မြိ့နယ်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅၀)ကျော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိထိန်းသိမ်းခဲ့ရာ မွန်းလွဲ (၂)နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် လူစုကွဲသွားသည်။ ဆပ်ခင်းရွာမှ (၁၄)ဦး၊ နေပူကုန်းရွာမှ (၁၆)ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလဲ သိရှိရသည်။ ဇူလိုင်(၁)ရက်နေ့ နံနက် (၆)နာရီတွင် ထပ်မံဖြစ်ပွားရာ ပြင်းထန်စွာအပြန်အလှန်ကျူးလွန်မှုများကြောင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လေ့ကျင့်ရေးသုံး ဂရီနာကျည်ဆံများဖြင့် သုံးစွဲဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။ အဆိုပါနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ရောက်ရှိလာကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေပေးခဲ့ကြောင်း CJ Myanmar မှ သတင်းရရှိသည်။ သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ - ၀မ်းတွင်းသားReplyDeleteAdd commentLoad more...